गर्लफ्रेन्ड - Naya Patrika
काठमाडाैं, २ फागुन | फागुन ०२, २०७४
भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउने नेपाली संस्कृति गलत या ठीक ? यस विषयमा धेरै चर्चा नगरौँ । अहिलेलाई समय र परिस्थितिको मागका रूपमा बुझौँ । नेपाली समाज र संस्कृतिको परिमार्जित रूपका रूपमा लिऔँ ।
संविधानले समेत ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्न सबैलाई छुट छ भन्ने जानौँ । र, त्योभन्दा बढी प्रेम सर्वव्यापी छ र यसलाई बन्देज लगाउने आधारहरू अहिलेसम्म खडा भएका छैनन् भन्ने हेक्का राखौँ । कसैलाई प्रेम गर्ने दुस्साहस गरौँ, तर धोकाको बीज कहीँकतै उम्रन नदिऊँ । र, भ्यालेन्टाइन डे’लाई सकेसम्म रंगिन बनाउने प्रयास गरौँ ।
गलफ्रेन्डको विषयमा कुनै सर्वमान्य परिभाषा छैन, जसरी प्रेमको विषयमा छैन । त्यसैले हरेकले यस विषयमा आ–आफ्ना फरक–फरक दृष्टिकोण, धारणा, भनाइ, मान्यता, सिद्धान्त, बुझाइ राख्छन् । र, मेरो विचारमा गलफ्रेन्ड/ब्वाईफ्रेन्डको सम्बन्ध त्यो हो, जसले खुस र दुःखमा एक–अर्कालाई साथ दिन्छ, पीडामा रम्न सिकाउँछ, एकान्तमा एक्लोपन महसुस हुन दिँदैन, सफलतामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ, अप्ठ्यारोमा हिँड्न सिकाउँछ, प्रेमद्वारा सधैँ मुस्कुराउन प्रेरित गर्छ र यस्तैयस्तै ।
जुन सम्बन्धमा स्वार्थ हुँदैन, जुन सम्बन्ध पवित्र हुन्छ, जहाँ एक–अर्काले आफू सुरक्षित महसुस गर्छन्, जहाँ सपनाका कुरा गरिन्छ र त्यसलाई पुरा गर्न हरदम प्रयार गरिन्छ, त्यो हो गलफ्रेन्ड/ब्वाईफ्रेन्डको सम्बन्ध । र, यी सबै कुराहरू आमा–छोरा, बाबु–छोरीबीचमा पनि पाउन सकिन्छ । त्यसैले आमाबाबु हाम्रो गलफ्रेन्ड/ब्वाईफ्रेन्डभन्दा फरक पर्ला र ?
प्रेमले पीडा होइन, आनन्द दिन्छ । निद्रा नलाग्नु प्रेम हुनै सक्दैन, प्रेममा त सन्तुष्टि हुन्छ, सन्तुष्टिमा आनन्द अनि आनन्दमा निद्रा । जसरी हामी आमाको काखमा निर्धक्कसँग निदाउन सक्छौँ, प्रेमले त्यस्तै निद्रा दिनुपर्ने होइन र ? तर, हामी प्रेमलाई बेचिरहेका छौँ, प्र्रेमको नाममा व्यापार चलाइरहेका छौँ, यसको अर्थ र परिभाषालाई तोडमोड गरिरहेका छौँ, त्योभन्दा बढी स्वार्थी भएका छौँ, प्यासी भएका छौँ र सँगसँगै मूर्ख पनि ।
यस सम्बन्धलाई आमा–बाबुसँग जोडेर हेर्दा विरोधाभाष उत्पन्न होला । गलफ्रेन्डरब्वाईफ्रेन्डबीचको शारीरिक सम्बन्धको कुरा उठ्ला । तर, त्यसका लागि त विवाह हुनुपर्ने होइन र ? मैले माथि नै भनिसकेँ, स्वार्थरहित र पवित्र सम्बन्ध रहन्छ गलफ्रेन्डरब्वाईफ्रेन्डमा । र, त्यो छैन भने उनीहरू असल प्रेमी–प्रेमिका हुनै सक्दैनन् ।
प्रेम आमाबुवासँग पनि हुन्छ भने गलफ्रेन्ड/ब्वाईफ्रेन्डको सम्बन्ध किन हुन नसक्ने ? गर्ल को अर्थ भनेको केटी अथवा महिला र फ्रेन्ड भनेको साथी होइन र ? हो आमाबाबुलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । छोराछोरीका हरेक कुराहरू बुझ्ने आमाबाबुको सम्बन्धभन्दा अर्को पक्ष कुन होला ? जहाँ ‘सेयर एन्ड केयर’ धेरै हुन्छ त्यही सम्बन्ध बढी प्रेमिल हुन्छ । र, प्रेमिल सम्बन्धमा प्रेम हुन्छ । अब तपाईं आफैँ भन्नुस्, त्यो प्रेम तपाईं कहाँ महसुस गर्नुहुन्छ ?
अहिले हामीले गलफ्रेन्ड/ब्वाईफ्रेन्डको सम्बन्धलाई जसरी प्रेमको संज्ञा दिएका छौँ, त्यो प्रेम हुनै सक्दैन । किनकि प्रेमले पीडा होइन, आनन्द दिन्छ । निद्रा नलाग्नु प्रेम हुनै सक्दैन, प्रेममा त सन्तुष्टि हुन्छ, सन्तुष्टिमा आनन्द अनि आनन्दमा निद्रा । जसरी हामी आमाको काखमा निर्धक्कसँग निदाउन सक्छौँ, प्रेमले त्यस्तै निद्रा दिनुपर्ने होइन र ? तर, हामी प्रेमलाई बेचिरहेका छौँ, प्र्रेमको नाममा व्यापार चलाइरहेका छौँ, यसको अर्थ र परिभाषालाई तोडमोड गरिरहेका छौँ, त्योभन्दा बढी स्वार्थी भएका छौँ, प्यासी भएका छौँ र सँगसँगै मूर्ख पनि ।
अब कसले भन्छ मेरो गलफ्रेन्ड छैन भनेर ? मेरी आमा मेरो गलफ्रेन्ड हुनुहुन्छ । हो, म भ्यालेन्टाइन डेमा सबेरै उठेर उहाँलाई नै विस गर्नेछु । सबैले आफ्नो सोच बदलौँ र प्रेमलाई बदनाम नपारौँ । ‘ह्याप्पी, भ्यालेन्टाइन्स डे ।’